ယောက်ျားလေးများ ကြိုက်တဲ့အသီး… :) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ယောက်ျားလေးများ ကြိုက်တဲ့အသီး… :)
ယောက်ျားလေးများ ကြိုက်တဲ့အသီး… :)
Posted by lone on Nov 22, 2011 in Short Story | 29 comments
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ပငေါတိုင်းပြည်မှာ ဒညီး လို့အမည်ရှိတဲ့…မင်းသမီးလေးတစ်ပါး ရှိသတဲ့ကွယ်။
အဲဒီ့ မင်းသမီးလေးဟာ အရမ်းကို ချောမောလှပပြီး ကြည့်မြင် ရသူတိုင်း ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အလွန်ကောင်းသူလေးဖြစ်လေသည်။ မင်းသမီးလေးဟာ ဘယ်လောက်ချောမောလည်း ဆိုရင် ကောင်းကင် က နှူးဘာနတ်သားကပင် သူရဲ့ ဘယ်ညာ နတ်သမီး အားလုံးကို မေ့ရလောက်အောင်ပင် ချောမောသူ ဖြစ်ပါသတဲ့။
တစ်ခုရှိတာက ဒညီးမင်းသမီးလေးဟာ တစ်ခြားသူများနဲ့မတူ ငယ်ငယ်ကတည်းက သားငါး မစားသူလေးဖြစ်သတဲ့ကွယ်။ အသီးအရွက်ကိုပဲ နေ့တိုင်းစားသောက်လေသတဲ့ ။ ပငေါဘုရင်ကြီး ရဲ့ တစ်ဥ တည်းသော ရတနာလေးပေါ့ကွယ်။ ဘုရင်ကြီးဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့
အသီးအရွက်တွေ မထပ်အောင် ကျွေးမွေးလေသတဲ့။တစ်နေ့သ၌ တိုင်းပြည်က ရှိသမျှအသီးအရွက်တွေ မှာ မင်းသမီးလေးမစားဖူးတာမရှိသဖြင့် အရင်ကကျွေးဖူးတဲ့ အသီးအရွက်တွေကို ပြန်လည် ကျွေးမွေးသတဲ့။ ဒါပေမယ့် မင်းသမီးလေးက အသစ်အဆန်းကို သာ စားချင်တယ်လို့ ဘုရင်ကြီးကို တောင်းဆိုသတဲ့။ ဘုရင်ကြီးမှာ အခက်တွေ့နေတုန်း ကောင်းကင်က နှူးဘာနတ်သား ကသူ့ဘုံနန်းကို လိုက်ခွင့် ပေးပါ။ မင်းသမီးလေးအတွက်လူ့ပြည်မှာမရှိတဲ့ အသစ်အဆန်း အသီးလေးတွေရှိပါတယ် ဟု ဘုရင်ကြီးကို လျှောက်တင်လိုက်လေသည်။ဘုရင်ကြီးမှာလည်း ဒညီး မင်းသမီးလေးကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်သဖြင့် နှူးဘာနတ်သားနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်လေသည်။ဒါပေမယ့် ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်သာ နေခွင့်ရှိပြီး ဘုံနန်းကနေဘာမှယူဆောင်လာခွင့် မရှိဟု မိန့်တော်မူလိုက်လေသည်။ အဲ့ဒီ့ ခေတ်က ကောင်းကင် က ပစ္စည်းတစ်ခုယူလျှင် လူ့ပြည်၌အမျိုးသမီးများ ကလေးမွေးရခက်သည်ဟု ပရောဟိတ်ကြီးများက နိမိတ်ဖတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။မင်းသမီးလေးမှာလည်း ဘုရင်ကြီး၏အမိန့်ကိုနာခံပြီး နှူးဘာနတ်သားနဲ့လိုက်သွားလေသည်။ နှူးဘာနတ်သားက သူ့ဘုံနန်းကို ရောက်တဲ့အခါ သူကိုယ်တိုင်ရှာဖွေမျိုးစပ်ထားတဲ့ အသီးပင်တစ်ပင် ကို ပြလေသည်။ မင်းသမီးလေးမှာ အဲဒီ့ အပင်ကို မြင်တာနဲ့ပင်စားချင်စိတ်အလွန်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အားပါးတရစားလေတော့သည်။ အိမ်ပြန်ချင်စိတ်ပင်မေ့လောက်အောင် ဒီအသီးနဲ့ပင်နေ့တိုင်းထမင်းစားပြီး နှူးဘာနတ်သားနဲ့အပျော်ကြီးပျော်
နေလေသည်။ ရက်သတ္တပတ်ပြည့် တဲ့အခါမှာတော့ နှူးဘာနတ်သားက မင်းသမီးလေးကို တိုင်းပြည်ပြန်ဖို့သတိပေးလေသည်။ မင်းသမီးလေးမှာ
လည်း ပြန်လည်း ပြန်ချင်သည်။အသီးလည်း သယ်သွားချင်နေလေသည်။ဒါပေမယ့် ဘုရင်ကြီးရဲ့ အမိန့်ကိုလည်း လွန်ဆန်၍မရဖြစ်နေလေသည်။ အဲဒါနဲ့ နှူးဘာနတ်သားက အသီးရဲ့ မျိုးစိတ်ကိုဘုရင်ကြီးမသိအောင်မင်းသမီးလေးခန္ဓာကိုယ်ကအလုံခြုံဆုံးနရာမှယူသွားရန်ပြောလေသည်။လြူ့ပည်ရောက်ရင်ဒီအသီးလေးကို သေချာစိုက်ဖို့လည်း မှာလိုက်လေသည်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့မင်းသမီးလေးကို လူ့ပြည်ပြန်လွှတ်လိုက်လေသည်။ မင်းသမီးလေး ကို ပြန်ပို့တဲ့စီးတော်ယာဉ် ဟာ လူ့ပြည်မရောက်ခင်မှာပဲ ဂက်စ် အိုးပေါက်ပြီး ပျက်ကျလေတော့သည်။ မင်းသမီးလေးအတွက် ဘုရင်ကြီးသာမက တစ်တိုင်းပြည်လုံးက ၀မ်းနည်းပူဆွေးကြရလေသည်။ဘုရင်ကြီးက မင်းသမီးလေးကိုချစ်လွန်းသောကြောင့်သူ့ရဲ့ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာပဲ ကောင်းမွန်စွာ မြေမြုပ်သဂြိုလ်စေသည်။ လေးငါးခြောက်လလောက်ကြာတဲ့ အခါမှာတော့ မင်းသမီးလေးကို မြုပ်ထားတဲ့နေရာအလယ်တည့်တည့် မှ အပင်တစ်ပင် ထွက်လာလေသည်။ အဲဒီ့အပင်က သီးတဲ့အသီးကို လည်းတစ်တိုင်းပြည်လုံးကို ဘုရင်ကြီးက စားစေသည်။ အဲဒီ့ အသီးမှာအနံ့တစ်မျိုးပါလာလေသည်။ အဲ့ဒီ့အသီးကို တိုင်းသူပြည်သားများက မင်းသမီးလေးနမည်ကို အစွဲပြုပြီး ဒညီး လို့ပေးခဲ့သည်။ အနံ့တစ်မျိုးပါလာသောကြောင့် ဒညီး အနံ့သင်း တဲ့ ဒညီးသင်း လို့နမည်ပေးခဲ့ကြရာ ယခုထိ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများစားသုံး
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ်…ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့လည်း နားလည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ကွယ်။… ယခုခေတ်မှာ တော့ ဒညီးသင်း ကို ဒညင်းသီး ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လိုက်ကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် အဲ့ဒီ့အသီးကို ယောက်ျားလေးများပိုမိုကြိုက်ကြပါသည်။ lone ရဲ့ အစ်ကို ၀မ်းကွဲတစ်ယောက်နဲ့ lone သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆိုလျှင် ဒညီးသင်း အဲ့ ဒညင်းသီး မပါရင် ထမင်းမစားတာတွေ့ရတယ်။
lone ၆တန်းလောက်က ဖတ်ဖူးတဲ့ပုံပြင်လေးကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ကိုးကားပြီး ဟာသအနေနဲ့ရေးထားတာပါ။…တကယ်မဟုတ်ပါဘူး….
ဒါပေမဲ့ ဒညီးသင်း ဆိုတော့ ..ကြိုက်တော့ဝူး..:)
မန်းလေးက ကျောက်သထေး တစ်ယောက်တော့ ဒညီးသင်း တော်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုပဲ
နှူးဘာနတ်သားတွေဖြစ်တဲ့..ဂီနှူးဘာတို့ ၊စည်နှူးဘာတို့ ၊တီနှူးဘာတို့ ..ကတော့
အသီးစားချင်ရင်တော့..ကျွန်ုပ်တို့ .နှူးဘာနတ်သားများ အခြေစိုက်ရာ..သီရိမင်္ဂလာဈေး..
သိမ်ကြီးဈေးအောက်၊ခရေပင်အောက်တို့ မှာ လာရောက်သုံးဆောင်နိုင်ပါကြောင်း
ဘာယောက်ျားများ ကြိုက်တဲ့အသီးလဲ ….
ညှညှတတ ကျော မှာပေါ့
အဲ့ဒညီးသင်းကို သဲထဲမြှုပ် အညောက် ထွက်အောင်ထားပီးမှ
ဒညက်ဝင်း ဆိုပီး ဖော်စားကြတဲ့ မမတွေ ပေါမှပေါ
ဒညီးသင်းကိုပဲ နူးနေအောင်ပြုတ် …တူလေးနဲ့ ပြားပြားလေးဖြစ်အောင်ထုပီးမှ
အုန်းနို့ ဆမ်းစားကြတဲ့ တီတီ၀၀ဂျီးဒွေလည်း ပေါမှပေါ
ယောက်ျားတွေလည်း ကြိုက်ဝူးတော့ ဟုတ်ပါဝူး
ဒညီးသင်း အလုံး၅၀ပြုတ်ပီး အရက်နဲ့ မြည်းလိုက်တာ
ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ ဂီ့ဘော်ဒါ တကောင် တွေ့ဖူးလို့ပါ
ဒညက်ဝင်း က ဒညီးသင်း လောက်အနံ့မဆိုးဘူးလေ…သူက တိုက်ရိုက်ပေါက်တာမဟုတ်ဘူး..သွယ်ဝိုက်ပေါက်တာဆိုတော့ အနံ့ အဲ့လောက်မဆိုးဘူး..
မိလုံးကတော့ လုပ်ပြီနော် …
ကောင်လေးတွေတခြားအသီး ကြိုက်မကြိုက်တော့ မသိဘူး .. အုန်းသီးတော့ကြိုက်ကြတယ် … ချိုလို့ထင်ပါ့
ဒညီးသင်းကြီး ကြိုက်ဖူး။ မင်းသမီးလေးကလည်း တခြားနာမည်မှည့်တာ မဟုတ်ဘူး။ အပေါ်က ဒေါ်အိတုန်ကတော့ အုန်းသီးကြိုက်တယ်တဲ့။ ချိုတယ်ဆိုဘဲ
တားတား..က အ၀ှာသီးမှ ကြိုက်တာ..
ဒရင်းသီးပြောဒါဘာ… ;) ;)
အနံ့ပြင်းတာဖြစ်ရမယ်လို့ စဉ်းစားမိတွားတယ် ဂယ်ပဲ ချားချင်စိတ်ကုန်တယ်
မန်းတလေး မြို့ က
မိုးကုတ်ရွှေတုတ် ရဲ့ ရှူးရှဲလဘက်သုပ် ကို သူတို့ ဆိုင်မှာ ရောင်းတဲ့ ကချင်ဘက်ကလာတဲ့ ဒိန်ညင်းသီး ၂ လုံး လောက်နဲ့ အုပ်လိုက်ရလို့ ကတော့
ရှူးရှဲ ရှူးရှဲ နဲ့ လျှာလည် သွားမှာ အမှန်ပါဘိ
အဲဒိအသီးနဲ့ ဘီအီးတွေ့လိုက်လို့ကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာ ကိုယ်က ထွက်သမျှ အကုန် နံပါကြောင်း…..။ မောင်ပေနဲ့ ဖောက်ဖော်ကိုမေးကြည့်ပါလား……………….။ ဒါပေမဲ့ အဒိအသီးကို ဆီးဒုက္ခ မပေးအောင် စားသင့်ပါကြောင်း………..။ ဒညင်းသီး ပြုတ်ကို အခွံသင်ပြီး ထက်ခြမ်းခြမ်း အစေးများပြောင်အောင် ရေဆေးပါ….။ တစ်ခြမ်းစီက အစေ့ညှာလေးတွေကို ဖယ်ရှားပြီး စားပါက ဆီးမအောင့်တတ်ပါ…….။ ဒီအတိုင်း ဒညင်းသီးပြုတ်အိုးကို ဒီအတိုင်း ခွစားနေလို့ကတော့ ဆီးအောင့်တတ်ပါကြောင်းးးး………….။
ဖတ်ရတာတောင် နံတယ်..ဘိုနေ ရေ့..
ဘီအီးနဲ့ ..ဒညီးသင်းနဲ့ဆွဲလာပြီး လာရေးသွား သလား အောင့်မေရတယ်..
အလုံခြုံဆုံးနေရာက အနံ့ နဲ့ 
ဓညင်းသီးက အနံ့နဲ့ က
အလုံခြုံဆုံးနေရာက အနံ့နဲ့ ဒညင်းသီးနံ့နဲ့တူတယ်လို့ cobra ဘယ်လိုသိလဲ…:P
ဦးကြောင်ကြီးက လည်း ဘာတွေပြောမှန်းမသိ…
ယောက်ျားမှာ နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်…ဂန္မူးမဟုတ်ရင်အာလူးသာရွေး ဒါကိုပြောစရာလည်းပြော…ကြည့်ကျပ်ပြီးဖောတာဖော…
တညင်းသီး ကတော့ များများ စားရင် ကျောက်ကပ်မှာ ပြသနာ ဖြစ်ပြီး ဆီးအောင့်တာ ဆီးမသွားနိုင်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ စားတော့ စားပေါ့ ချင့်ချိန်ပြီးတော့ စားသင့်တယ်။
တညင်းသီးရဲ့ အရသာက စားလို့အရမ်းကောင်းပါတယ် … ဒါပေမယ့် စားပြီးလို့ ပြန်ထွက်လာတဲ့ အနံ့က ဆိုးလွန်းတော့ ကြိုက်ပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်း မစားတော့ဘူး … ရှောင်တယ် …
အေကေကေအို အကြိုက်က အဲဒါဖြစ်မယ်။
အုန်းသီးနှစ်လုံး …. အီးတစ်တုံး… တစ်လုံးခေါင်းပေါ်တင် တစ်လုံး…
တစ်လုံး ခေါင်းပေါ်တင် နှစ်လုံး ဖင်ခုထိုင်..
တစ်လုံး တည်းက ပြုတ်မကျ..
အဲဒါ အီးတုံးကွ.. ဟိဟိ
မင်းသမီးလေး နတ်ပြည်တက်သွားကတည်းက ရေမချိုးဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ် နတ်ပြည်တစ်ပတ်ဆို တော့ အင်း တော်တော်လေးအနံ့အသက်ကောင်းနေပြီပေါ့ ငပိရည်ကျိုအနံ့လေး ဟိဟိ ထည့်ထားတဲ့နေရာလေးဝင်ဆွဲလိုက်လို့ကတော့ (အမေက ငပိရည်ကျိုကိုကြောင်အိမ်ထဲထည့်ထားတတ်လို့)
နောက်ဆို မစားတော့ ပါဘူးဗျ။ လူမမြင်အောင်ဘဲ စားတော့မယ်။
ဒညီးသင်းကို ဥပါဒ်မဖြစ်အောင်စားချင်ပါက ဒညီးသင်းပြုတ်သောအိုးထဲတွင် ဒညီးသင်းနှင့်အတူ ရောမ ထညက်ခဲ ( ရောမကလာသောထညက်ခဲမဟုတ်ပါ) မြန်မာပြည်တွင်ပြုလုပ်သော ( ၀ရောမ ) ဟုခေါ်သော ထညက်ခဲနှင့် နာနတ်သီး အခွံ ကို ထည့်ပြုတ်ပါက ရောဂါဘယများ အဖြစ်နည်းတတ်ပါကြောင်း၊ ဒညီးသင်း စားပြီး နာနတ်သီး စားပါက အနံ့အသက်များ ပျောက်ကင်းကြောင်း၊ ဆီးကျဉ်ခြင်းများ၊ ဆီးအောင့်ခြင်းများ ဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကင်းဝေးပါကြောင်း ဒညီးသင်း ကြိုက်သော ကိုကိုများ၊ မကြိုက်ဘူးဟု ပြောသော ( ကွယ်ရာမှ တိတ်တခိုး မမများကို ) သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။ မယုံရင် စမ်းကြည့်လိုက် ။ မာမီသော်ကွ။
ဒညင်းသီးက သုံးခါနံ တဲ့အသီးလေးပါ.
ကျွန်တော်လဲယောကျာင်္းလေး ပါဗျာ ဒါပေ.မယ်မစားပါဘူး အနံကိုမကြိုက်လို. ပါ